Bulshadena koox ba ku dhex nool,Sun u karkarinaysa,Mushkiladooda maxan kaga badbaadnaa? | Berberatoday.com
Bulshadena koox ba ku dhex nool,Sun u karkarinaysa,Mushkiladooda maxan kaga badbaadnaa?
March 15, 2016 - Written by berberatoday berberatoday
Bismillahi raxmani raxiim,salama calaykum ku soo dhawada fariintii Bulshada.
Bulshadu maxay ugu fekerta Isbedel Dalka ka dhaca?
1-Bulshadu wax badan ayaay ka baratay,Xukunka Siilanyo iyo Xisbiga kulmiye waxay ku baratay cadala daro,waxay ku baratay dulmiga oo la xojiyo.waxay ku baratay qabiilkii oo xogeystey kana awood batay Dawladnimadii.Bulshadu uma dhimato Gajo iyo Abaro lakiin waxay u dhimata waa cadala daro iyo dulmi bahsan.
2-Bulshada waxa gadhay dhawacyo badan qalbigii ayay ka dileen,si naxariistu uga tagto,oo waxay karbashen caqligii bulshada,si xikamdu uga guurto.oo jeedal bay la dhecen damiirkii Bulshada,si wax waliba uga tagan.waxa gadhawdeen u ah koox,aan ixtiraamin Distorkii iyo xeerarkii dalka u yiil.
kooxdan gadhwadeenka ka noqotay xukumada siilanyo,may ixtiraamin xuquuqdii bulshada iyo xorital-qawlkii.may ixtiraamin xoriyadii Ganacsiaga iyo xuquuqdii shakhsigu xaqa u laha.
Suuragal maha in aan ka midha dhalino himilada,hadii aan bulshadu bedelin qaabka ay u fekerayso iyo asluubta ay ku dhaqmayso.waxa ino muhiim ah in aynu bedelo,caqligii aynu ku keenay xukumada kulmiye.Bulshadu yanay ka biqin Isbedel siyaasiya oo dalka ka dhaca wayo waxaynu ognahay in uu wax ku dari doono wixii ino qabsomay.
Bulshadu haday donayso in ay hesho wax wacan,oo weligeed hore u helin.waa in ay yesha oo ku talabsata wax anay hore ugu talabsan.waxa daruri ah in aynu naftena wax ka bedelo.
Marka hore Nafta ku edbi sharciga Alle.
Marka xiga Dawladnimada ka bilow naftada.
Cilmigana Hub uga dhig lakiin qabiil Hub hawga dhigin.
Bulshada dhexdeda waxa ku nool Rag Sun u karkarinaya,iyago halmansan in ay iyagu yihiin ragii ugu horeynayay ee dhadhamin laha.dariiqa ugu fudud ee aan kaga carari karna e kaga badbadi karna mushkiladoda,waxa weye inaga oo naftena aan ka talin,lakiin ka talina jiilka danbe iyo jiilka ay awoowga u noqon doonan ee ka sii danbeeya.
Waxaynu kaga badbadi karna,indhaheena oo arka xumaanta qofka ay isku qabiilka yihiin. iyo dhegteena oo aan maqalin ceebta laga sheego qofka anay isku qabiilka ahayn.waxaynu kaga badbaadi karna bulshada uu ceebta uga baqata,sida ay uga baqdan waxa Alle xaranta ka dhigay ay ka mid yihiin Hilibka Doofarka iyo Khamriga.
Amiirka Muse Gaadhane.